Zvidzivirire neAga Kuchengetedzwa Alarm | KarmanHealthcare.com
Patinofunga nezvemaaramu, taiwanzobatana neruzha rukuru kuti zvinhu zvisave munzvimbo yedu, sedzimba nemahofisi. Alarm yega inoshanda nenzira imwecheteyo. Icho chinhu chidiki chaunotakura icho chinokutendera iwe kudzvanya bhatani kuburitsa ruzha rukuru sairini apo anorwisa anosvika kwauri. Icho chimiro chekuzvidzivirira kana paine mamiriro ezvinhu ane njodzi.
Ukaona uchiteverwa kana kubatwa usingadi, zvese zvaunofanirwa kuita kudzvanya bhatani kana kudhonzera pamusoro pechigadzirwa (zvichienderana nerudzi rweyambiro yako). Izvi zvinobata kutarisisa kwevanhu kuri padyo.
Mumusika wanhasi, kune akasiyana siyana maaramu emunhu anouya akasiyana maumbirwo, hukuru, uye mashandiro. Mazhinji acho anoitwa madiki akakwana kuasungira mubhegi rako, mabhegi, uye cheni dzakakosha kuti vanhu vatakure chero kwavanoenda.
Yambiro yehunhu chinhu chikuru chekuzvidzivirira kuva nacho nekuti hapana zvirambidzo zvezera. Chero ani zvake anogona kuishandisa kusanganisira vana vadiki nevakuru.
Kufunga nezve kutenga wega alarm? Karman Healthcare inotakura kuchengetedzeka alarm mune mana mavara. Kudhonza kuri nyore kubva kumusoro kwechigadzirwa kuchaburitsa alarm ine ruzha, yekuboora nzeve.